वैशाख २१, २०७६ रमेश सायन
त्यो पुरुष उपभोक्ता जो उधारो सामान बेच्ने टोलको किराना साहुलाइ बिहानै बिहानै ढोग्छ र उधारो रासन लिन्छ
बजारको कफि साहुलाइ ढोग्छ
नगद तिर्छ !
एक कप तातो तातो कफि पिउाछ।
कपडा पसल छिर्छ
कपडा साहुको बिश्वासमा पर्छ
आफुलाइ पटक्कै नसुहाउने रंगको कोट किन्छ।
कहिलेकाहीा गहना पसल छिर्छ
साहुजीको पैतला सम्मै झुक्छ !
र खल्ति छाम्छ !
सिथिल मुस्कानमा उभ्भि रहेकी यौन सुन्दरीलाइ
वालेटको एक कुनाबाट मुल्यमा दलाली गर्छ
अन्त्यमा न्युनतम मूल्य तिर्छ
र चरम आनन्द किन्छ।
मूर्ख उपभोक्ता !
अन्त कतै घृणा गर्न सक्दैन
अरु कसैलाई अपमान गर्न सक्दैन
आफ्नै आनन्दलाइ घृणा गर्छ /अपमान गर्छ।
मेरो ऐनामा बारम्बार यही उपभोक्ता देख्खिरहन्छ !